Echiche nke Padre Pio na Eprel 14, 2021 na nkọwa banyere Oziọma taa | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Paolo Tescione - Eprel 14, 2021
Echiche nke ụbọchị Padre Pio 14 April 2021. Aghọtara m na ọnwụnwa dị ka ihe nkocha kama ime ka mmụọ nsọ dị ọcha. Mana ka anyị nụrụ ihe asụsụ ndị nsọ bụ, na ihe a o zuela gị ịmara, n'etiti ọtụtụ, ihe Saint Francis de Sales na-ekwu. Nke ahụ Ọnwụnwa dị ka ncha, nke gbasaa na uwe yiri ka ọ na-ete ha ma n'eziokwu na-eme ka ha dị ọcha.
"Chineke hụrụ ụwa n'anya nke ukwuu nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighi ebi." Jọn 3:16
Ozioma nke taa na okwu Jesu
Anyị na-aga n'ihu, taa, ịgụ site na nneme oro Jesus ekenemede ye Nicodemus. Onye Farisii nke mechara gbanwee ma kwanyere ya ùgwù dịka otu n’ime ndị nsọ mbụ nke Nzụkọ. Cheta na Jizọs mara Nikọdimọs aka dị ka otu ụzọ isi nyere ya aka ime mkpebi siri ike ịjụ echiche ọjọọ nke ndị Farisii ndị ọzọ wee ghọọ onye na-eso ụzọ ya. Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ae hotara n’elu sitere na mkparịta ụka izizi nke Nikọdimọs na Jizọs nwere, Andmụnna anyị ndị nwoke na ndị nwanyị na-ekwupụtakarị ya dịka nchịkọta nke Ozi Ọma dum. Ma n'ezie ọ bụ.
N'oge nile isi nke 3 nke Oziọma Jọn, Jesus akụzi ìhè na ọchịchịrị, ọmụmụ si n'elu, ajọ omume, mmehie, ikpe, Mmụọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Mana n'ọtụtụ ụzọ, ihe niile Jizọs kụziri n'isiakwụkwọ a na n'ozi ọ na-eje maka ọha bụ nke a pụrụ ịkpọkọta n'okwu a dị nkenke: “Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na O nyere ọbụna Ọkpara Ọ mụrụ naanị Ya, ka ndị niile kwere na Ya o nwere ike notla n'iyi kama o nwere ike inwe ndu ebighi ebi “. A pụrụ ịkụzi ozizi a dị mkpirikpi gaa n'eziokwu ise dị mkpa.
Nke mbụ, ịhụnanya Nna ahụ nwere n’ebe ụmụ mmadụ nọ, ma kpọmkwem n’ebe unu nọ, bụ ịhụnanya miri emi nke na ọ nweghị ụzọ anyị ga-esi aghọtacha omimi nke ịhụnanya Ya.
Nke abuo, ihunanya nke Nna n’anya anyi manyere Ya inye anyi onyinye kasịnụ anyi nwere ike inweta na onyinye kariri nke Nna nyere: Nwa Ya nke Chi. A gharịrị ịtụgharị uche na onyinye a n’ekpere ma ọ bụrụ n’anyị ga-abịa nghọta miri emi karị banyere mmesapụ aka na-enweghị ngwụcha nke Nna.
Nke ato, dika anyi na ekpe ekpere, anyi n’abata n’ime nghota nke onyinye a di egwu site n’aka Okpara, nani nzaghachi anyi kwesịrị ekwesị bụ okwukwe. Anyị kwesịrị "kwere na ya". Nkwenye anyi gh’enwewanye omimi dika nghota anyi.
Echiche nke ụbọchị Eprel 14 na Oziọma
Nke anọ, anyị ga-achọpụtarịrị na ọnwụ ebighị ebi ga-ekwe omume oge niile. O nwere ike ịbụ na anyị “laa n’iyi” ruo mgbe ebighị ebi. Ọmụma nke a ga-enye nghọta miri emi karị banyere onyinye nke Ọkpara dịka anyị matara na ọrụ mbụ nke Ọkpara bụ ịzọpụta anyị na nkewapụ ebighi ebi na Nna.
N'ikpeazụ, onyinye nke Ọkpara nke Nna ọ bụghị naanị ịzọpụta anyị, kamakwa iduru anyị gaa n’eluigwe. Ya bu, enyere anyi “ndu ebighebi”. Onyinye ebighi ebi a nwere oke enweghi oke, uru, ebube na mmezu.
Na-atụgharị uche taa na nchịkọta nke Oziọma a niile: "Chineke hụrụ ụwa n'anya onye nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọbụla kwere na ya we ghara ila n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighi ebi ”. Were ya n'ahịrị, na-achọ n'ekpere iji ghọta ọmarịcha eziokwu na-agbanwe agbanwe nke Onyenwe anyị kpughere nye anyị na mkparịta ụka a dị nsọ na Nikọdimọs. Gbalịa ile onwe gị anya dị ka Nikọdimọs, ezigbo mmadụ nke na-agbalị ịghọta Jizọs na ihe ọ kụziri nke ọma. Ọ bụrụ na ị nwere ike gee ntị n'okwu ndị a soro Nicodemus ma nabata ha nke ọma fede, mgbe ahụ gị onwe gị kwa ga-ekere oke n'ebube ebighi ebi okwu ndị a na-ekwe nkwa.
Onye-nwem di ebube, I biakutere anyi dika Onyinye Kachasi Ebube. Are bụ onyinye nke Nna n’elu-igwe. Ezitere gị site na ịhụnanya maka nzube nke ịzọpụta anyị ma duru anyị baa n'ebube ebighi ebi. Nyere m aka ịghọta na ikwere na ihe niile ị bụ na ịnabata gị dị ka Onyinye nchekwa maka mgbe ebighi ebi. Jesus ekwere m na gị.
Nkọwa banyere Oziọma nke Eprel 14, 2021